गुरुहरु संयम नगुमाउनु होस् -सम्पादकीय - Tanahun Awaj
Home विचार/दृष्टिकोण	गुरुहरु संयम नगुमाउनु होस् -सम्पादकीय
गुरुहरु संयम नगुमाउनु होस् -सम्पादकीय
by Tanahu Awaj 12th March 2020 12th March 2020
12th March 2020 12th March 2020 178 views
–भक्तपुर जडीबुटी स्थित जागृति माध्यमिक विद्यालयकी शिक्षिका सीतालक्ष्मी कर्माचार्यले परीक्षामा थोरै अंक ल्याएको भन्दै ३४ विद्यार्थीलाई पेन्सील कटरको ब्लेडले नाडीमा चिर्न लगाएको अभियोग लागेपछि शनिबार उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
केही समय यता शिक्षकले विद्यार्थीलाई विभिन्न नाममा यातना दिएका र कुटपिट गरेका यी र यस्तैखाले घटनाका झण्डै दर्जन समाचार प्रकाशित भइसकेका छन् । कतै गृहकार्य नगरेको भनेर कुटपिट गरेका, कतै प्रार्थना स्थानमा समयमा नआएको भनेर कुट्दा हात भाँचिएका त कतै नजानेको प्रश्न सोधेको भनेर पिट्दा विद्यार्थी घाइते भएका समाचार आइरहे । शिक्षकले यातना दिएका कारण बालबालिकाले विद्यालय छाडेको समाचार पढ्नु पर्दा हरेक पाठकको मन कटक्क खाँदो हो । अरुलाई अनुशासन, संयम र कर्तव्य/अकर्तव्यको पाठ पढाउने शिक्षकले नै कर्तव्य भुल्ने र संयम गुमाउने भएपछि ति शिक्षकबाट दीक्षित हुन चााहने विद्यार्थीले कस्तो दीक्षा ग्रहण गर्ला भन्ने प्रश्न यतिबेला सर्वत्र चर्चामा छ ।
आखिर किन विद्यार्थीमाथि यसरी खनिन्छन् त शिक्षकहरु ? यसका कारण बारे सोधखोज गरिनु सायद अब जरुरी भैसकेको छ । सम्भावना अनेकौं हुन सक्छन् । नतिजा राम्रो दिनैपर्ने दवावमा शिक्षकहरु छन् तर आम विद्यार्थीमा पढ्ने बानीमा ह्रास आएका कारण विद्यालयकले भने जस्तो राम्रो नतिजा दिन सहज छैन । संगै सत्य के पनि हो भने कुनै पनि बालबालिका परीक्षामा आफ्नो कम अंक आओस् भन्ने पक्कै चाहँदैनन् । कतिपय प्रतिकूलताका कारण उनीहरुले आफैले र शिक्षकले अपेक्षा गरे अनुरुप अंक नल्याएका हुन सक्छन् । फेरी बालबालिकाको उमेर समूह अनुसारका बानीहरुका विषयमा शिक्षकहरु जानकार हुनु जरुरी छ र आम शिक्षकहरु जानकारी हुनुहुन्छ, पनि । तर फेरी किन यस्ता यातनाका घटनाहरु दोहोरिरहेका छन् ? बुझ्न सकिएको छैन ।
एउटा शिक्षकको काम काँचो सुनको रुपमा रहेको बालकलाई आकार दिनु हो । उसमा व्याप्त अनेक खालका अन्धकारलाई हटाउनु एउटा गुरुको कर्तव्य र दायित्व हो । तर माथि उल्लेखित घटनाहरुले कतै शिक्षकहरु आफ्नो कर्तव्य र दायित्वबाट विमुख हुँदै गएका त होइनन् भन्ने प्रश्न उब्जेको छ । शिक्षक पनि मानिस हो र मानवजन्य रिस, आवेग लगाएतका गुण शिक्षकमा पनि हुन्छन् । तर शिक्षकले ति रिस, आवेग र उत्तेजनालाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्नु जरुरी छ । यसै त शिक्षकको मर्यादा डाँडा माथिको घाम भै सकेको अवस्थामा यस्ता घटनाले झन त्यसलाई अवसान तर्फ लैजान सघाउने वातावरण सृजना गरेको
छ । सबै गरुहरुलाई संयम नगुमाउन अनि आफ्नो कर्तव्य र दायित्व प्रति सदा सचेत रहन हाम्रो आग्रह ।
कोरोना, होली र क्वारेन्टाइन
दादुरा–रुवेला र कोरोनाप्रति सर्तकता
प्रधानमन्त्रीलाई केही निम्छरा प्रश्नहरु–२
सम्बन्ध विच्छेद र फरार प्रतिवादी
सलहको सन्त्रास बीच धान दिवस तथा रोपाइ महोत्सव-सम्पादकीय
कानूनीराज, पहुँच र हाम्रो न्याय
पन्ध्र असार/आयातित चामल
गणतन्त्रका बाह्र बर्ष, थोरै आशा धेरै निराशा
मेलमिलापकर्ता, पारिश्रमिक र सेवा
हिंसा विरुद्धको अभियान गाउँमुखी हुन आवश्यक छ